Famongorana ny fahalovana :: Nosokafan’ny Bianco ny tranonkala manamora ny fitorohana kolikoly • AoRaha
Famongorana ny fahalovana Nosokafan’ny Bianco ny tranonkala manamora ny fitorohana kolikoly
Nitombo iray ny fitaovana fanenjehana an’ireo mpanao kolikoly. Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny Carlton Anosy, omaly, ny tranonkalam-pifandraisana « I-Toroka » eo ambany fiahian’ ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco). Efa am-perinasa tanteraka ity fitaovan-tserasera hahafahan’ ireo olom-pirenena tsy an-kanavaka mitoroka sy mampahafantatra ireo trangana kolikoly mety hisy any amin’ ny fiarahamonina rehetra any ity. Tanjona ny fanamorana kokoa ny fomba hoentina miady amin’ny kolikoly amin’ ny alalan’ny teknolojia maoderin’ny fifandraisana.
Mampiavaka an’io fitaovana vaovao hampiasain’ny Bianco io ny tsy fanerena an’ireo mpitoroka kolikoly hampaha- fantatra ny mombamomba azy. “ Tsy ho fantatra mihitsy ary na izahay aza dia tsy hahalala ny mombamomba azy ireo. Tombony ho azy ireo ny fametrahana fitarainana na aiza na aiza misy azy, na inona na inona raharaha hampitainy amin’ny Bianco”. Voalaza ao anatin’ny fitsipika mifehy ny fampiasana ny fitaovana fa mampigadra herintaona hatramin’ny folo taona an-tranomaizina ny fikasana hampahafantatra na hampanao fikarohana an’ireo mpitoroka ireo.
« Tsy misy tokony hatahorana intsony ny fametrahana fitoriana», hoy ny tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean Louis. Tsy voatery manatitra fitarainana na fitoriana eny amin’ny biraon’ ny Bianco intsony ireo olom- pirenena fa avy hatrany dia afaka mandefa ny fitarainana ao amin’ny tranonkalan’ny Bianco amin’ny adiresy « doleance. bianco-mg.org ». Ny fikambanana alemana Gesellschaft fur internationale zusammenarbeit (Giz) no niara-niasa akaiky tamin’ny Bianco tamin’ny fanokasana an’io tranonkala io.
Tsy nohasarotina fa tsotra ny fomba fidirana ao amin’ ity tranonkalam-pifandraisana ity. Tsy mila adiresy mailaka na anarana ny fametrahana fitarainana. “Kaody” na tarehi- marika maromaro fotsiny no omen’ny Bianco hahafahan’ ireo mpitoroka miditra sy mivoaka ao anatin’izany. “Efa misy ireo toromarika arahina amin’ny famaritana ireo karazana kolikoly hampitaina. Efa misy ihany koa ny paingotra hahafahan’izy ireo mandefa antontan-taratasy fanamarinana na feo na sary hahafahan’ny Bianco manao ny fanadihadiana”, hoy ny fanazavana nentin’ireo tompon’andraikitry ny Bianco.
Mandalo dingana maro kosa anefa vao ho tonga amin’ ny fitsarana manokana misahana ny kolikoly (PAC) ny fitarainana na fitoriana ataon’ireo mpitoroka.
Fiainana tarika :: Mandindona ny tarika Salala amin’ny endriny vaovao ihany ny feo beson’i Senge
Fikirakirana voka-pifidianana :: Manasa ireo kandidà miahiahy hanao fampitahana miaraka aminy ny Ceni